कोरोनासँग होइन, सीडीओ र डाक्टरबीच लडाइँ – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
कोरोनासँग होइन, सीडीओ र डाक्टरबीच लडाइँ
६ वैशाख, काठमाडौं । देशभर कोराना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अपनाइरहेको छ । सिंहदरबारमा दैनिकजसो बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने काम चलिरहेको छ ।
जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूले केन्द्रीय नीतिअनुसार कोरोनाको रोकथामका लागि धमाधम काम गरिरहेका छन् । तर, दाङ जिल्लामा भने केन्द्र मातहतका सरकारका दुई प्रमुख अंगबीच पाखुरा सुर्कासुर्की छ ।
सदरमुकाम घोराहीमा केन्द्र मातहतको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ । त्यसको केही किलोमिटरको दुरीमा सिङ्गो जिल्ला हाँक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को कार्यालय छ । यी दुई कार्यालयबीच १५ मिनेटको पनि दुरी छैन । तर, भौगोलिक दुरीको के कुरा, सीडीओ कार्यालय र प्रतिष्ठान हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीबीच मनको दुरी भने कोशौं टाढाको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गोविन्द रिजाल र प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीबीचको दुरी बढेको धेरैलाई थाहा पनि थिएन। तर, दुवै जना एकअर्काबीच सामाजिक सञ्जालमा आरोपप्रत्यारोपमै उत्रिएपछि सबै कुरा छताछुल्ल भएको छ ।
पहिले नेतासँग, अहिले सीडीओसँग
पहिले प्रतिष्ठान र जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुबीच चलेको लडाइँ अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)मा सरेको छ। प्रजिअ र प्रतिष्ठानबीच लडाइँको निहुँ कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने किटको विषयमा हो ।
सरकारले कोरोनाको परीक्षण गर्न जिल्लाकै ठूलो अस्पताल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ल्याब उपलब्ध गरायो । तर, किट नपाएपछि त्यो प्रयोगमा आएको छैन । किट नपाउनुको दोष प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारीले प्रजिअ गोविन्द रिजाललाई लगाएपछि उनीहरूबीचको वाकयुद्ध फेसबुकको भित्तोमा छताछुल्ल भयो ।
उपकुलपति भण्डारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रजिअ रिजालले प्रतिष्ठानबारे गलत रिपोर्टिङ गरेकाले किट नपाएको आरोप लगाइन् भने प्रजिअ रिजालले त्यसको खण्डन गरे ।
उपकुलपति भण्डारीले फेसबुकमै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवसँग प्रजिअ रिजालले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्द भएकाले कोरोना परीक्षण किट आवश्यक नभएको भनेर रिपोर्टिङ गरेको र त्यही रिपोर्टिङनुसार मन्त्रालयले किट नपठाएको लेखिन् । सीडीओले त्यसकै मुनि कमेन्ट गरेर आरोपको प्रतिवाद गरे । विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुवैले एकअर्कालाई केटाकेटी हर्कत देखाएको टिप्पणी गर्दै मर्यादामा बस्न सुझाव पनि दिन भ्याए ।
प्रजिअ रिजाल लेख्छन्, ‘मेरो जिम्मेवारीको बारेमा तपाईंले सिकाउनु पर्दैन । मैले रिपोर्टिङ गर्ने कहाँ हो मलाई थाहा छ र गलत कुरा रिपोर्टिङ गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ । पेशागत जिम्मेवारी र मर्यादा म राम्रोसँग बुझ्छु ।’
रिजालको यस भनाइमा उपकुलपति भण्डारी लेख्छिन्, ‘तपाईंलाई थाहा भए यस्तो केटाकेटी हर्कत किन गर्नुहुन्थ्यो ? …आकाशमा थुक्न खोज्दा आफ्नै मुखमा झर्ने हो ।’
शुक्रबार अपराह्नतिर छताछुल्ल भएका यस्ता धेरैजसो कमेन्टहरु दुवैले फेसबुकबाट डिलिट गरिसकेका छन् । तर अनलाइनखबरसँग स्क्रिन सट सुरक्षित छ ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि दाङ जिल्लाका कम्युनिस्ट, कांग्रेस सबै दलका नेताहरुले संयुक्त पहल गरेका थिए । अन्ततः २०७४ असोज २४ गते प्रतिनिधिसभाबाट ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ विधेयक पारित भयो ।
प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा (एमबीबीएससम्म) पढाइ हुने भयो । प्रतिष्ठानलाई दाङको लागि मात्र होइन, साविकको राप्तीवासीकै लागि अमूल्य सम्पत्तिको रुपमा प्रचार गरियो ।
Tags: कोरोनासँग होइन सीडीओ र डाक्टरबीच लडाइँ
Previous संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएका ११ जनाको पहिचान
Next दोस्रो कोरोना संक्रमित युवती निको भएर घर फर्किइन्